Kulankii Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo xalay u baaqday shuruud lama filaan ah | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kulankii Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo xalay u baaqday shuruud lama filaan ah
Xog aan helnay ayaa sheegeysa in uu baaqday shirkii xalay lagu waday inuu Muqdisho uga furmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland.
Shirka ayaa u baaqday dalab ka yimid madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo madaxtooyada ku war-geliyey in waqti dheeraad ah la siiyo inta uusan furmin shirka ay lagu wado inay la yeeshaan madaxweyne Farmaajo.
Labada madaxweyne ayaa shalay xubnaha beesha caalamka hor dhigay shuruudo inta uusan furmin shirka, kuwaas oo laga xusay in ciidamada dowladda federaalka laga soo saaro gobolka Gedo ee Jubbaland.
Lama oga in shuruudahaas ay la xariirto sababta uu xalay u baaqday shirkii loo balansanaa, balse xubno ka tirsan Villa Somalia ayaa noo sheegay in labada madaxweyne ay ku soo war-geliyeen inay waqti dheeraad ah u baahanyihiin si ay u soo tashadaan.
Galabta ayey aheyd markii Madaxweynaha Jubbaland iyo Taliyaha NISA ay kulan saacado badan qaatay ku yeesheen Muqdisho, iyadoo xogta aan helnay ay sheegeyso in kulankaas looga wada-hadlay arrimaha gobolka Gedo oo ka maqan gacanta Jubbaland.
Kulankii Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo xalay u baaqday shuruud lama filaan ah was last modified: September 3rd, 2020 by Admin